Black Magic: Ophcrack ကိုသုံးပြီး Admin Password ကျော်နည်း (For Windows7, Vista , XP)
Ophcrack ကိုသုံးပြီး Admin Password ကျော်နည်း (For Windows7, Vista , XP)
Posted by Black Magic | Posted in Computer Softwares , Hacking , နည်းလမ်းများ | Posted on 10:48 PM
Windows Password ကျော်နည်းများစွာရှိတဲ့အထဲမှ Free Open Source Software တခုဖြစ်တဲ့ Ophcrack ဆိုတဲ့ Software နဲ့ ကျော်နည်းကို ပြောပေးချင်ပါတယ်..၊ ဒီနည်းကိုအသုံးပြုပြီးWindows XP ကော Windows Vista မှာ Password ကျော်နိုင်ပါတယ်။
Ophcrack ဆိုတာ Rainbow Tablesပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ Open Source Softwareဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲက Windows,Linux, Mac platformများနှင့် Graphical User Interface(GUI)တို့နှင့်အတူ
ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဒီကောင်က Windows Passwordကို Recoverနှင့် Hack ခြင်းတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Ophcrack ကိုအသုံးပြုပြီး Windows7passwordကိုဘယ်လို Crack မလဲ?
1.အရင်ဆုံး Opacrack Softwareကို ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
2.Blank CD/DVDမှာ Bun ဖို့အတွက် Windows 7(or) Windows Vista ဆိုလျှင်
*Click on ophcrack Vista/7 Live CD
*Windows XP ဆိုလျှင် Click on ophcrack XP live CD
3.CD/DVD တခုခုမှာ Runပြီးရင်တော့ ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ပြီး စက်ကို Restart ချပါ။
4.Bootမှာသွားပြီး Windows တင်သည့်အတိုင်းရွေးချယ်ပါ။ ပြီးရင် အောက်ကပုံအတိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
5. ပြီးရင် Ophcrack Graphic Mode-automatically ကိုရွေးချယ်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
6. Screen ပေါ်မှာ လိုင်းတွေအများကြီးနှင့် Codeတွေကိုလျှင်မြန်စွာ ထုတ်နေမှာပါ။ (Computer ပျက်မှာ မကြောက်နဲ့နော် :P )
7. ခနနေရင် အောက်ကပုံအတိုင်း Ophcrack ကနေ Passwordကို Recovery လုပ်ပြီးကြောင်း Empty ဆိုတဲ့ Notice တတ်လာပါလိမ့်မယ်။Ophcrack ပေါ်မှာ သင့်ရဲ့ Adminstrator နှင့် Guest Accountတွေကို ပြနေမှာပါ။ ဆိုလိုချင်တာက အဲဒီအကောင့်တွေကို နှိပ်ပြီင်္း ဘာ Password မှမလိုဘဲ ဒီအတိုင်း ကွန်ပျူတာကိုဝင်ရောက်သွားနိုင်ပါပြီ။